Isudi Phu usana - isivikelo kusuka frost
Lolo ebusika. Sekuyisikhathi ukuxoxa ubusika izingubo izingane. Yini izingane zethu kuyoba ifudumele entabeni seqhwa ku isihlibhi noma ngisho ngesihlalo sabakhubazekile sishaywe nomama?
Yiqiniso, abazali abaningi baye zinakekelwe kusengaphambili futhi uthenge konke ababekudinga ukuze ingane. Isihloko sethu kulotshiwe kulabo abaye abangakayitholi isikhathi ukukwenza. Namuhla sizoxoxa ovaloli feather ingane.
Eminyakeni yamuva, fluff isibe ezisetshenziswa kakhulu ukwahlukanisa eliphezulu ovaloli zezingane. Lokhu kuchazwe kalula. Fluff anezakhi eziyingqayizivele njengobulungisa ukudlala futhi ihlala isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, elinesimo izakhiwo amanzi-oxosha, kunesithembiso kahle imikhiqizo yayo ukuma zingamelana yesithwathwa kanzima. Ezinganeni ngokuvamile eziningi lisetshenziswa eider phansi, kulandelwa ihansi. Iqiniso ukuthi ubhekwa olufudumele. Kodwa duck phansi ukugwema - ke ngeke efudumele.
Down ovaloli izingane - insindiso kubazali ekahle izingane. Kodwa inqobo nje uma kuba umkhiqizo izinga. Ngokwesibonelo, owaziwa ezweni lethu ovaloli Finnish adumile brand Nels ukunikeza ingane yakho ifudumele bezihambela, ngisho-degree amathathu frost. Ukuvikelwa enjalo yenziwa Sibonga kungenzeka ukuba zemvelo Pukhov yamathebhu. izingubo Zonke zezingane nomkhiqizi Finnish eyenziwe yesimanje izinga okusezingeni izinto thembeke zivikela izici zangaphandle kanye bakwazi "ukuphefumula." ovaloli downy ngoba ingane ine ungqimba engaphakathi polyester ukuthi uyakwazi ukususa umswakama. Lining eyenziwe uboya noma ukotini soft. Ezinye amamodeli we inkampani for abancane kungenziwa siguqulelwa imvilophu, okuyinto efanelekayo izingane kusukela ezinsukwini zokuqala zhizni.Pravilno yakhelwe futhi Ithungelwe feather ovaloli ngomntwana ukala kungathi izingalo ezingamakhulu amahlanu amagremu. Uyavuma ukuthi isisindo enjalo akunakwenzeka ukuthatha umntwana asebenzayo futhi eyingqabavu yimuphi kabi. izingubo okunjalo ngeke sivimbele ukuqhubekela, akusho ukwandisa umthwalo emahlombe zezingane. Kungaba kuphela echazwe kuphela "icala" Isudi - kuba efudumele kakhulu. Ngakho-ke, musa ukugqoka ingane efudumele kakhulu.
Enye inkampani ethandwa - inkampani Canadian O-Hara. It ngokukhethekile ekwenzeni eliphezulu izingubo. Winter phansi ovaloli izingane ziya luphahlekwa ihansi phansi. Inani lalo e-ungqimba ukushisa namakhaza - 80%. Furry eyenziwe raccoon noboya noma yama-beaver. Izindaba ezinhle ngempela intengo imali (ruble 3 kuya kwezingu-5).
Wezingane phansi ovaloli Moncler laziwa kabanzi emhlabeni wonke. Bright ukukhanya, imodeli enakho i ukuklanywa babe ethile eyodwa kuphela - izindleko kuqhathaniswa ephezulu (ababecishe babe izinkulungwane eziyishumi). Ukukhetha suit phansi ingane, ningangabazi, aniyikwenza okomkhiwane ukuthi ingane efudumele futhi ethokomele. Nokho, isimo sezulu ezingaqinisekile kuleli nezinyanga zasebusika, lapho phakathi ebusika iqala ngokuzumayo lehla, ungakwazi nokuqhuba ukwenzela ukuthengwa esingaphansi nezambatho ezifudumele.
Yini izicathulo ukugqoka, ibhulukwe emfushane? izingubo Trendy for girls
I-Tunic: iyini nokuthi yini okufanele ugqoke umthamo omkhulu wehlobo
Mayelana Intaba T-Shirts - The Good Futhi kuphi Thenga
Akusikho okungena ku zabesifazane ihembe uphizi?
Amaphijama zabesifazane - nice ethokomele
Kungani i-Internet iyithuluzi ishibhile ukuthenga?
Institutionalization Kwenkohlakalo - esigabeni esiphezulu kanye sokugcina yayo
Indlela ukulungiselela yamathebhu kusukela kwesibindi noma inhlanzi
Ibhukhimakhi "I-Fonbet": ukubuyekezwa kwabadlali nokubuyekezwa
Indlela ukuthola umthamo ngqo imithi? Imithamo kwemithi izingane kanye nabantu abadala
Izwekazi Afrika: izici eziyinhloko imvelo kanye nabantu. Amaqiniso ethakazelisayo nezwekazi
Pilaf ebhodweni kuhhavini: ukupheka zokupheka